Malunga nathi -Shenzhen UUGreenPower Electrical Co, Ltd.
Shenzhen UUGreenPower Umbane Co, Ltd.inegunya lobungcali kunye neqela le-elektroniki ye-R & D, amalungu aphambili e-R & D awayekade esebenza e-Emerson nase-Eltek. Siqokelele amava phantse eminyaka engama-20 kubuchwephesha bokunikezela ngombane nge-DC kwaye kuyilo olunobuchule siyakwazi ukuba siphuhlise uthotho lweemodyuli zokutshaja kubandakanya i-40kW, 30KW, 20KW kunye ne-15KW ezikhethekileyo kwimfumba enkulu yokutshaja.
Sigxila kumacandelo asisiseko kunye nezisombululo ezibanzi zamandla ombane omtsha wokutshaja iimfumba. Kwaye ikakhulu sinikezela ngezixhobo ezifanelekileyo zeemodyuli zamandla, ukutshaja iimodyuli zokujonga imfumba kunye nokutshaja iqonga lokusebenza kwemfumba njl.
Okwangoku siqhayisa olona luhlu lweemveliso lubanzi kwicandelo lokutshaja iimodyuli zamandla emfumba, kwaye besigcina indima ekhokelayo ngokobuchwephesha kunye neemveliso. Imveliso yemodyuli ye-30kW yokutshaja isetyenziswa ngokubanzi kwimarike yasekhaya nakwamanye amazwe. Imodyuli yokutshaja ekhuselayo ephezulu ye-IP65 kunye ne-40kW yemodyuli yokutshaja amandla amakhulu iya kukhutshwa kwintengiso ukuphela kwe-2020.
Njengenkampani entsha yetekhnoloji yamandla, i-UUGreenPower ijolise kubuchwephesha bamandla e-elektroniki, kwaye izibophelele kuphando nakuphuhliso, ukwenziwa kunye nokuthengiswa kwezinto eziphambili zezixhobo zokutshaja eziphezulu. Sigxininisa ekusombululeni amanqaku eentlungu zabathengi, sikhula kunye nabathengi, kwaye ngokudibeneyo sikhuthaza uphuhliso lwamashishini ezithuthi zombane ngamandla aluhlaza kunye noqoqosho lwekhabhoni esezantsi.
Okwangoku, iimveliso zenkampani ziye zavavanywa kwaye zaqinisekiswa liZiko loPhando lweMandla oMbane eGridi, isiqinisekiso se-CE, isatifikethi se-UL. Iimveliso zisetyenziswe ngokubanzi kwiimarike zasekhaya nakwiimarike zaphesheya, kwaye zinentsebenziswano enzulu kunye nabathengi abavela eUnited States, eJamani, eFrance, e-Itali, eMzantsi Korea, eThailand naseIndiya.
I-UUGreenPower yaqala ngokusungula imodyuli yokutshaja ye-30kW ngoJuni ka-2017. Yinto yokuqala eyenziweyo enetekhnoloji yemodyuli ye-30kW esele ikhulile kolu shishino, kwaye ikwangomnye wabavelisi bemodyuli ezimbalwa kolu shishino ezivelise ngobuninzi iimodyuli ezingama-30kW kwaye zingqinwe Isicelo sentengiso. Njengoko uxinano lwamandla emodyuli yokutshaja engama-30KW ukuya kuthi ga kwi-45W / in3, ukusebenza ngokugqibeleleyo kuphezulu, ukusebenza kwemveliso kugqwesile kwaye indleko iyabonakala, imodyuli yamandla angama-30kW ikubambe ngokukhawuleza ukutshaja okuphezulu kunye namandla aphezulu kwimarike.
I-UUGreenPower iya kuqhubeka nokwandisa utyalo-mali lwe-R & D kumbane wokutshaja ngokukhawuleza kwamandla kunye nokusebenza kweemodyuli eziphezulu. Imodyuli yokutshaja yamandla amakhulu angama-40kW kunye nemodyuli yokhuseleko oluphezulu ye-IP65 iya kukhutshwa ukuphela kuka-2020 eya kuthi iqhubeke nokudibanisa indawo ephambili yenkampani kwicandelo le-EV yokutshaja kakhulu kunye nokwenza izisombululo.